Keeniyaan seera farra shororkeessitootaa haarawa raggaasiste - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Keeniyaan seera farra shororkeessitootaa haarawa raggaasiste
Perezidaantiin Keeniyaa, Uhuruu Keeniyaattaa, seera haarawa nageenyaa mallatteesse. Seerri kuni humnoota baha Aafrikaatti hidhatanii socho’an loluuf gargaara, akka yaada perezidaantichaatti. Perezidaant Keeniyaattaan miseensota paarlaamaa kanniin yeroo seerri kuni ragga’u mormiifi jeequmsa heddu kaasanis qeeqaniiru, akka gabaasa Al jazeeraatti. Perezidaantichi lammiin biyyattii seericha kana, kan angawoota nageenyaatiif angoo guddaa kennu, akka dubbisanis gaafateera.
Seerri haarofni sochiifi miidhaa shororkeessitoonni biyyattii irraan gayaa jiran hir’isuuf bahe kuni mormiin heddu kanniin mirga namaaf falaman irra isa mudateera. Sodaan garee kanaas seerichi kuni mirga dimokraasii daangessa sodaa jedhu qaban. Humnoota mirga namoomaatiin alatti Ameerikaan, Briteen, Jarmaniifi faransaayi gamtaan seerichi akka mirga dimokraasii lammiiwwan biyyaa akka hindaangessine akekkachiisaniiru. Ibsi isaanii, ‘seerri kuni, osoma nageenya biyyattii cimsuu qabuuu, mirga namoomaafi dirqamoota addnuyaa biyyattiin sente kabajuu qaba,’ jedha. Itti dabaluudhaanis ibsi kuni, heera Keeniyaa tiksuun, mirga lammummaafi dimokraasii mirkaneessuun daandii cimaa nageenya biyyattii ittiin mirkaneessan ta’uus addeesseera.
Yaanni mormisiisaan tokko waa’ee kanniin shororkeessummaan shakaman guyyaa meeqaaf too’annaa poolisii jala turuu qabu kan jedhu. Hanga ammaatti shakkamaan tokko bultii 90 kan harka poolisii turu. Seerri haarofni kuni garuu, shakkamaan tokko hanga woggaa tokkoof akka haraka poolisii turu hayyama. Poolisiiniifi anagwoonni nageenyaa mirga bilbila namaa dhageeffachuus qabu.
Gama biraatiin seerri kuni gaazexeessitootaafis rakkoo qabatee as bahe qaba. Akka seera haarawaatti sababa gabaasa gaazexeessaa tokootiin hojiin qorannoo poolisiifi nageenyaa eegsistootaa laaffate ykn suuraan kanniin rukuttaa shororkeessitootaan miidhaan irra gayee hayyama poolisii malee tamsa’e taanaan hanga woggaa 3 hidhaan adabamuu danda’u.
Bayiinsa seera haarawaa kanaaf sababa guddaa kan ta’e rukuttaa Al-Shabaab woggoota as kaluu kana Keeniyaa irratti fudhateedha. Rukuttaan Al-Shabaab, gama biraatiinis, nageenya eegsistoonni biyyattii dhaabbilee shororkessittota maallaqaan gargaaran jedhan 500 ol ta’an akka cufaniifis sababa ta’eera.
seera farra shororkeesitootaa
Previous articleDhalli ilmanamaa 6% araada intarneetiin qabameera. Isin hoo?
Next articleSadarkaa addunyaatti duuti sababa dhibee daddarbaan dhufu gadi bu’e; umriinis 65.3 gara 71.5 ol ka’e